Booqashadii madaxa UNDP ee Soomaaliya oo Muqdisho soo gaartay: VIDEO
Helen Clark, madaxa hay`adda Qaramada Midoobay ee UNDP ayaa soo gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho halkaas oo ay kulamo kula qaadatay madaxda sare ee dowladda.
by calanka —	August 26, 2016 —	Video
Jahwareer boorso oo qabsaday 320 ciyaartoy British ah: VIDEO
Ciyaartoyda dalka Britain uga qeyb galay ciyaaraha Olombikada adduunka ayaa markii ay dib ugu soo noqdeen dalka Britain waxaa ay la kulmeen jahwareer kaddib markii ay kala garan waayeen boorsooyinkooda.
by calanka —	August 25, 2016 —	Dibedda, Video
Barnaamij muuqaal ah oo aad kaga bogan karto isbaddellada xooggan ee Muqdisho
Mudo sagaal sannadood gudohood ayaa waxaa dalka Soomaaliya ka dhacay isbaddello isdabajoog ah kuwaas oo horseeday in nolosha iyo nabadda ay kusoo laabato dalka islamarkaana rajada dadka ay dib usoo noqoto.
by calanka —	August 25, 2016 —	Jacbur, Video
Maxaad kala socotaa xaaladda nololeed ee magaalada Barawe?: SAWIRRO
Magaalada Baraawe waa magaalo ku taal gobolka Shabeelaha Hoose, waxay ka mid ahed magaalooyiinkii ay ku xoogganaayeen Al-Shabaab ka hor inta aanay ciidamada huwanta ka qabsan afar sano ka hor. Waa sidee xaaladda nololeed ee iminka?
by calanka —	August 25, 2016 —	Sawirro
Booqashadii Micheal Keating ee magaalada Kismayo: VIDEO
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “Madoobe” ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay MIchael Keating.
by calanka —	August 24, 2016 —	Gudaha, Video
Booliska Fransiiska oo haweeney muslim ah dharka uga dhigay xeebta: SAWIRRO
Booliska magaalada Nice ee dalkaasi Fransiiska ayaa dharka ka dhigay haweeney muslim ah oo u dabaal-tagtay xeeb ku taal isla magaalada Nice. Haweeneyda ayaa ganaax lacageed la dul dhigay kaddib markii la dhar dhigay.
by calanka —	August 24, 2016 —	Sawirro
Dhul-gariir khasaare geystay oo ka dhacay dalka Talyaaniga: SAWIRRO
Gobolka Amatrice ee dalkaasi Talyaaniga ayaa waxaa shalay galab ka dhacay dhul-gariir dhaliyay khasaare naf iyo maalba leh. Waxaa ilaa iyo iminka la soo saaray meydka ilaa lix ruux.
Buundo dhalo ah oo laga hirgeliyay dalka Shiinaha: SAWIRRO
Buuraha Zhangjiajie ee dalkaasi Shiinaha ayaa waxaa laga hirgeliyay buundo dhalo ah oo injineerkii sawiray Haim Dotan ugu talo galay in lagu wareero. Dhirirka buundadan ayaa lagu sheegay 430 mitir.
by calanka —	August 23, 2016 —	Sawirro
Wariyeyaal loo tababarayo qaabka loo tebinayo doorashada: VIDEO
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay ka furmay tababar dhinaca saxaafadda ah oo la soonayo wariyayaasha kaas oo salka ku hayo qaabka ay u tabinayaal doorashado la filayo in ay Soomaaliya ka dhacdo dhamaadka sanadkan.
by calanka —	August 23, 2016 —	Gudaha, Video
Ilmo yar oo lasoo miineeyay oo lagu qabtay Ciraaq: SAWIRRO
Booliska dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay wiil yar oo 12-jir ah kaas oo lagu soo xiray miino, waxaana ay ciidamadu ku guuleysteen in ay ka furaan miinada islamarkaana ay kaxeeyaan wiilka.